Taariikh Nololeedka Xubno Ka Mid Ah Musharaxiinta Madaxtinimo Ee Dalka Soomaaliya | FooreNews
Home wararka Taariikh Nololeedka Xubno Ka Mid Ah Musharaxiinta Madaxtinimo Ee Dalka Soomaaliya
Taariikh Nololeedka Xubno Ka Mid Ah Musharaxiinta Madaxtinimo Ee Dalka Soomaaliya
FoorenewsAug 25, 2012wararka0
Dhawaan waxa dalka Soomaaliya laga qaban qaabinayaa doorashada madaxtinimo tii ugu horraysay ee dalkaasi dagaaladu aafeeyeen loogu qabto gudihiisa. Mansabka hogaamineed ee xukuumadda dalkaasi waxa ilaa imika isu soo taagay ku dhawaad afartameeye nin. Aan ka milicsano qaar ka mid ah musharaxiintaasi.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa madaxweynaha xiligan ee Dowladda Federaalka Kumeel-Gaadhka (DFKMG) ah, oo waqtigeedu uu dhamaaday Ogos 20-keeda.
Shariif Axmed waxa uu sannadkii 1964-tii ku dhashay meel u dhow magaalada Jowhar, halkaasi oo uu ku qaatay waxbarashadiisii dugsiga hoose. Markii dambe waxa uu u guuray Muqdisho halkaasi oo uu waxbarashadiisii dugsiga sare ku dhameeyay Dugsiga sare ee Sheekh Suufi.
1992-dii, Axmed waxa uu iska diiwaan-galiyay Jaamacadda Kordofan ee dalka Suudaan, laba sano kadibna waxa uu u wareegay Open University oo ku taala dalka Liibiya, isaga oo 1998-dii ka qalin jabiyay Kuliyadda Shareecada iyo Qaanuunka. Waxa uu maaddooyinka Juqraafiga, Carabiga iyo Tarbiyada Islaamka ka dhigayay Dugsiga sare ee Jubba ilaa sanaddii 2004-tii, markaasi oo loo magacaabay in uu hoggaamiyo Midawga Maxaakimta Islaamiga ah (ICU).
Maxaakimta Islaamigu waxa ay ahaayeen isbahaysi ka kooban maxakamad diimeedyo gobaleed oo xukumay inta badan koonfurta Soomaaliya.
Sanaddii 2007-dii, Axmed waxa uu ka tagay Maxaakimta Islaamiga, isaga iyo xubno kale waxa ay dhidibada u aaseen koox mucaarad ah oo la magac baxday Isbahaysiga Dib-u xorreynta Soomaaliya. Waxa uu markii dambe wada hadal ay maal galisay Qaramada Midoobay la galay dowladda kumeel gaarka oo uu hoggaaminayay Madaxweynihii geeriyooday Cabdulaahi Yuusuf Axmed, waxa uuna ku biiray baarlamaanka kumeel-gaarka Soomaaliya.
Axmed waxaa loo doortay in uu baddalo Cabdulaahi Yuusuf kadib markii uu is casilay bishii December 2008-dii. Axmed ayaa xukunka qabtay Janaayo 31-deedii, 2009-kii.
Madaxweyne Shariif waxa uu ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga iyo Carabiga.
Cabdiwali Maxamed Cali
Cabdiwali Maxamed Cali waxa uu dhashay dhamaadki 1950-meeyadii. Kadib markii uu dhamaystay waxbarashadiisii dugsiga sare, waxa uu ku biiray Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed, waxa uuna ka qaatay shahaadada jaamacada ee koowaad (bachelor) oo uu ku diyaariyay dhaqaalaha 1984-tii.
Waxa uu bartamihii 1980-maadkii ahaa agaasimaha qaybta canshuuraha ee Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Maaliyadda. Laga soo bilaabo 1988-dii ilaa 1991-dii, waxa uu ahaa kaaliyaha agaasimaha qeybta Cilmi-baarista iyo Tirakoobka ee Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Maaliyadda.
Markaas kadib, waxa uu u haajiray Maraykanka si uu u sii wato waxbarashadiisa sare.
Waxa uu shahaadada Masterka ka qaatay Jaamacadda Vanderbilt oo ku taala Nashville, Tennessee sanadkii 1988-dii, kadibna waxa uu Master kale oo Maamulka Guud ah ka diyaariyay Jaamacadda Harvard sanaddii 1999-kii.
Waxa uu sanaddii 2000 shahaadada Ph.D. ee dhaqaalaha ka qaatay Jaamacadda George Mason oo gobolka Virginia ku taala.
Sanaddii 2003-dii, Cali waxa uu maadada dhaqaalaha ka dhigay Jaamacadda Niagara ee ku taala New York ilaa uu ku biiray dowladda kumeel-gaarka ah, oo uu ka noqday ra’iisal wasaare kuxigeen iyo Wasiirka Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah.
Waxaa ra’iisul wasaare loo magacaabay 2011-kii markii uu Maxamed Cabdulaahi Farmaaji is casilay.
Cali waxa uu khabiir sare ku yahay wax ka dhigida jaamacadaha iyo cilmi baarista, horu-marinta iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo sidoo kale maamulka maaliyada iyo kan guud. Waxa uu ka soo shaqeeyay hay’ado caalami ah oo dhowr ah, sida Bagiga Adduunka iyo Hay’ada Qaramada Midoobay ee Hor’umarinta Mashruucyada (UNDP)
Inta uusan Soomaaliya ku soo laaban, Cali waxa uu ahaa xubin ka tirsan Ururka Dhaqaalayahanada Maraykanka, iyo Mujtamaca Dhaqaalaha Atlantic.
Cali waxa uu ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga, Ingiriiska iyo Talyaaniga, waxa uuna haystaa dhalashooyinka Soomaaliya iyo Maraykanka.
Shariif Xasan Sheekh Aaden
Shariif Xasan waxa uu sanadkii 1946-dii ku dhashay degmada Bardaale, isaga oo ka soo jeeda qoys asal ahaan ka yimi gobolada Bay iyo Bakool.
Aadan waxa uu siyaasadda kusoo biiray 2004-tii markii loo doortay af-hayeeenka baarlamaanka kumel-gaarka Soomaaliya. Waxa uu jagadaas hayay ilaa 2007-dii markii lagu eryay wadahadal aan dawladu ogalayn oo uu la galay xubno ka tirsan Midawga Maxaakimta Islaamiga.
Aadan ayaa loo magacaabay ra’iisal wasaare kuxigeen iyo wasiirka maaliyadda markii uu madaxweyne Shariif xilka qabtay 2009-kii, waxa uuna kamid noqday mid kamid ah ragga ugu caansan ee golihii wasiirada Ra’iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Maayo 2010-kii, baarlamaanka Soomaaliaya ayaa mar kale af-hayeen u doortay Aadan.
Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo
Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxa uu Muqdisho ku dhashay 1962-dii, isaga oo kamid ahaa qoys asal ahaan kasoo jeeda gobolka Gedo ee koonfur-galbeed Soomaaliya.
1985-tii, waxaa loo magacaabay xog-hayihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Washington DC.
1989-kii, xilkii ayuu ka tagay si uu u qaato shahaadada jamacada ee koowaad (bachelor) oo uu ku qaatay taariikhda kana qaatay Jaamacadda Buffalo oo New York ku taala. Intii lagi jiray xiligaa, Farmaajo waxa uu magangalyo siyaasadeed ka dalbaday dawladda Maraykanka, markii ay dowladdii Soomaaliya dhacday 1991-dii.
Waxa uu waxbarashadiisa ka sii watay Jaamacadda Buffalo, halkaasi oo uu ka diyaariyay shahaadada Masterka ee cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Markii uu noqday muwaaddin Mareykan ah, waxa uu New York ka qabtay shaqooyin dhowr ah, sida Buffalo Minicibial Housing Authority, Erie County Division of Equal Employment Opportunity iyo Waaxda gaadiidka ee Gobalka New York.
Madaxweyne Shariif ayaa Farmaajo u magacaabay ra’iisal wasaare October 2010-kii, si uu u badalo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, oo xilka iska casilay khilaaf awgiis.
Farmaajo ayaa jagada iska casilay Juun 2011-kii kadib markii uu cadaadis kala kulmay beesha caalamka, taasi oo qeyb ka aheyd Heshiiskii Kampala ee ay kala saxiixdeen Madaxweyne Shariif iyo Af-Hayeenka Baarlamaanka Aadan, heshiiskaas ayaa ilaa Agoosto 20-keeda 2012-ka sii kordhiyay waqtiga hay’adaha kumeel-gaarka ah.
2011-kii, Farmaajo ayaa aasaasay xisbi siyaasadeed oo cusub oo la magac baxay, Xisbiga Cadaaladda iyo Sinnaanta Soomaaliya, oo sidoo kale loo yaqaano Tayo.
Farmaajo xiligan waa xog-hayaha guud ee Tayo, oo ay guddoomiye ka tahay Dr Maryan Qaasim, oo aheyd wasiiraddiisii hore ee arimaha haweenka. Tayo waa xisbigii ugu horeeyay oo ay Soomaali leedahay oo ay haweeney hoggaamiso.
Farmaajo waxa uu ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska, waxa uuna haystaa dhalashooyinka Soomaaliya iyo Maraykanka.
Cali Maxamed Geeddi waxa uu Muqdisho ku dhashay 1952-dii.
Markii uu dhamaystay waxbarashadiisii dugsiga sare, waxa uu galay Jaamacadda Ummada Soomaaliya, waxa uuna ka qaatay shahaadada jaamacada ee koowaad (bachelor) ee cilmiga xanaanada xoolaha. Kadib waxa uu u safray Talyaaniga si uu u sii wato waxbarashadiisa kadib markii uu laba sano oo deeq waxbarasho ah ka helay Jaamacadda Pisa 1979-kii.
1981-dii, Geeddi waxa uu ku soo laabtay Muqdisho, waxa uuna macalin ka noqday Kuliyadda Xanaanada Xoolaha ee Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed, oo uu markii dambe madax ka noqday ilaa burburkii dowladda Soomaaliya 1991-dii.
Geeddi ayaa dawladdii Madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf ka soo noqday ra’iisal wasaare intii u dhaxaysay 2004-tii ilaa 2007-dii, markaasi oo uu is casilay.
Tani waa markii labaad oo uu Geeddi isku soo sharaxo madaxweynanimada Soomaaliya, markii koowaad waxa ay aheyd 2009-kii, balse waa uu ka noqday musharaxnimadiisa.
Geeddi waxa uu ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga, Talyaaniga iyo Ingiriiska
Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyoow
Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyow waxa uu gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ku dhashay 1954-tii.
Baadiyow waxa uu sanaddii 1971-dii ku biiray Ciidamada Qaranka Soomaaliya, isaga oo gaaray darajada Gaashaanle Dhexe, waxa uuna shaqada hayay ilaa 1986-dii, markaas oo uu go’aansaday in uu ciidamada ka tago sababo la xiriira jawaabtii uu Madaxweyne Siyaad Barre ka bixiyay kooxo qabaa’il ahaa oo la dagaalamayay xukunkiisa.
Markii uu ka tagay ciidamada militariga, waxa uu ku biiray Jaamacadda McGill ee Kanada, oo uu ka qaatay shahaadada Masterka iyo tan PhD-da ee Daraasaadka Islaamka.
Waxa uu Soomaaliya ku soo laabtay 1993-dii, isaga oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee Hay’adda Gargaarka iyo Hor’umarinta ee Mercy-USA, oo ah urur aan faa’ido doon ahayn oo ka shaqeeya gargaarka iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waxbarashada. Intii uu ka tirsanaa Mercy-USA, Baadiyoow waxa uu waxbarashada iyo caafimaadka ka shaqeeyay ilaa 2007-dii, isaga oo gobolka ka aasaasay dugsiyo hoose iyo dhexe iyo sidoo kale xarumo caafimaad.
1996-dii, waxa uu kamid ahaa aassasayaashii Jaamacadda Muqdisho oo uu ilaa xiligan ka yahay Gudoomiyaha Golaha Amaano Dhawrka
Sanaddii 2000, Baadiyoow waxa uu ka qeyb galay Shirkii Dib u Heshiisiinta Soomaaliya ee lagu qabtay Jabuuti, waxaana loo doortay in uu kamid noqdo Gudiga Farsamada ee ay shaqadoodu aheyd la socodka axdiga Dowladda qaranka Kumeel-gaarka ah.
Baadiyow waxa uu ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska, waxa uuna haystaa dhalashooyinka Soomaaliya iyo Kanada.
Axmed Ismaaciil Samatar waa aqoonyahan caan ah oo Maraykanka ku noolaa in ka badan 30 sano.
Waxa uu hadda yahay Profeseer James Wallace ee Daraasaadka Caalamiga ah, kana tirsan Koleejka Macalaster ee ku yaala Saint Paul, Minnesota, halkaasi oo uu sidoo kale kasoo noqday Hormoodka Daraasaadka Caalamiga ah iyo Barnaamijyeynta, waxa uu sidoo kale noqday Hormoodka aasaasay Institute for Global Citizenship.
Samatar waxa uu khabiir ku yahay qaybaha siyaasadda dhaqaalaha, fikirka siyaaadda iyo bulshada iyo horumarinta Afrika. Waxa uu qoray shan buug, waxa uuna daabacay in ka badan 30 maqaal. Waxa uu sanaddii 1984-tii darajada PhD ka qaatay Jaamacadda Denver.
Waxa uu macalin kasoo noqday jaamacado kala duwan, sida Jaamacada Ummada Soomaaliyeed, Dugsiga Dhaqaalaha iyo Cilmiga Siyaasadda ee London iyo Jaamacadaha Cornel, Havard, Amestardam iyo Otago.
Samatar waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa gobolada waqooyi ee dalka, waxa uuna kasoo hor jeedaa ka go’itaanka Somaliland ee dalka intiisa kale.
Waa hoggaamiyaha xiligan ee Xisbi Siyaasadeedka Hiil Qaran, ahna mid kamid ah 13 musharax oo aasaasay dalad ay ugu magac dareen Ururka Isbedel-doonka Qaranka. Kooxda ayaa galay heshiis midnimo ah, waxa ayna mid iyaga kamid ah u magacaabi doonaan muharax madaxweyne.
Samatar waxa uu haystaa dhalashooyinka Soomaaliya iyo Maraykanka, waxa uuna ku hadlaa Soomaali, Carabi iyo Ingiriis
Xasan Sheekh Maxamuud waa aqoonyahan iyo dhaqdhaqaaqe siyaasadeed iyo bulsho kaas oo ka soo shaqeeyay dhowr urur oo maxalli iyo caalamiba ah oo ka shaqeeya horumarinta iyo nabadda.
Maxamuud waxa uu ka qalin jabiyay Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed 1981-dii, kadibna waxa uu waxbarasho u aaday Hindiya halkaasi oo uu ka qaatay shahaadada Masterka Jaamacadda Bhopal sanaddii 1988-dii.
1993-dii, Maxamuud waxa uu noqday madaxa waxbarshada ee UNICEF ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa 1995-tii, markaasi oo howlgalkii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya la joojiyay.
1999-kii, waxa uu kamid ahaa aassaasayaashii Mac’hadka Maamulka iyo Maarraynta Soomaaliyeed ee Muqdisho, taasi oo markii dambe loo rogay Jaamacadda Simad, Hormood ayuuna ka ahaa ilaa 2010-kii.
2011-kii, waxa uu aasaasay Xisbiga Nabadda iyo Hor’umarka, oo uu hadda yahay guddoomiyihiisa.
Maxamuud waxa uu ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska.
Yuusuf Garaad Cumar waa saxafi rug caddaa ah, waana madaxii hore ee Laanta Af-Soomaaliga ee BBC London.
Cumar waxa uu sanaddii 1960-kii ku dhashay degmada Xamar Jajab ee Muqdisho, waxa uuna waxbarashadiisa dugsiga sare ku dhameystay Muqdisho. Waxa uu arday ka noqday Jaamacadda Ummada Soomaaliya, halkaas oo uu ka bartay luuqadda Faransiiska, kana qaatay shahaadada jamacada hore kuna qaatay barshada la xiriirta Luuqadaha.
Waxa uu Radio Muqdisho ku biiray 1984-tii, halkaasi oo uu ka shaqeeyay ilaa burburkii dowladdii dhexe.
1990-kii, Cumar waxa uu u haajiray Talyaaniga, waxa uuna ku biiray Jaamacadda Siena si uu u sii wato waxbarashada sare ee cilmiga aadanaha. Waxa uu BBC-da, laanteeda afka Soomaaliga ku biiray 1992-dii, markii hore waxa uu BBC-da si madax banaan ugala shaqeeyay isaga oo Talyaaniga wararaka ka soo tabin jiray. Waxa uu madaxa laanta noqday sanadkii 2000.
Cumar waxa uu haystaa dhalashooyinka Soomaaliya iyo Ingiriiska, waxa uuna ku hadlaa luuqadaha Soomaaliga, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska.
Previous PostWasiir Ku Xigeenka Waxbarashada Oo Difaacay Shir Urur La Yidhaahdo TOL Uu Ku Qabsaday Boorama Next PostWargeys Soo Bandhigay Muuqaalka Askarigii Maraykanka Ahaa Ee Dilay Usaama Bin Laadin